Mufudzi weAustralia Mufudzi weGerman Mufudzi: Imbwa yakanakisa? - Inobereka
Mufudzi weAustralia Mufudzi weGerman Mufudzi: Imbwa yakanakisa?
Unomboshamisika kuti iwe waizowana chii kana iwe ukayambuka unodzivirira mudziviriri neiyo turbo herder? Zvakanaka, iwe waizowana musanganiswa weAustralia Mufudzi wechiGerman Mufudzi!
Zvakare anonzi iyo Mufudzi weAustralia wechiGerman kana weGerman Mufudzi weAustralia, ichi chinoyambuka hachisi chinhu kana chisiri chakasimba. Iyi ndiyo imbwa inotarisisa iyo mhuri yega yega inoshanda ichada seshamwari.
Ramba uchiverenga kuti uone kuti chii chinoita kuti iyi yakasanganiswa ive yakakosha!
Iko kusanganisa kweAustralia kweGerman Mufudzi kunobva kupi?
Chitarisiko: Hunhu hwepanyama hweGerman Mufudzi Aussie musanganiswa
Vafudzi veGerman vafudzi vanoita imbwa dzakanaka dzeimba?
Kuve neAustralia Mufudzi wechiGerman Mufudzi musanganiswa
Imbwa dzeAustralia dzeGerman Mufudzi dzakagwinya here?
Yakawanda sei imbwa dzeAustralia dzeGerman Mufudzi?
Mamwe maAussie anosanganiswa nemuchinjikwa weGerman
Iwe wakawira murudo neAustralia Mufudzi wechiGerman Mufudzi musanganiswa?
Isu tinoziva zvishoma kwazvo nezve kweAustralia yeGerman Mufudzi mavambo. Iko hakuite kunge kune chero yakanyorwa nhoroondo yeiyi crossbreed zvachose.
Kuberekesa zvine hungwaru kungangodaro kwakatanga munguva yapfuura yapfuura, pamwe muUnited States. Asi kunyangwe iyoyo ingori kufungidzira kwedu kwakanyanya.
Iyi yemhando yehybrid imbwa yemubereki yemarudzi yave iripo kwenguva yakareba, zvakadaro. Iwe ungangodaro wakanzwa nezveaya maviri akakurumbira canines pamberi, asi ngatitorei chinguva kusangana imwe neimwe.
Kuzivisa weAustralia Mufudzi, shamwari yemukomana wemombe
Sangana neyakanaka uye mudiki weAustralia Mufudzi
Iwe unenge uchimanikidzwa-kutsva kuti uwane canine ne Mufudzi weAustralia tikacherechedza. Kwemakore anopfuura zana, imbwa idzi dzakadzungaira kuAmerica West, dzichitenderedza zvipfuyo kuvarimi nevarimi.
Zvisinei nezita ravo, veAustralia vafudzi kana Masangano havasi vanobva kuAustralia. Nepo rudzi rwacho rwakanatswa muOutback, iyi purebred yakatanga kwayo chaiyo kushanda makomo eEurope.
Pasina mubvunzo kutaura, yazvino Aussie inouya kubva kune refu mutsara we kufudza shasha !
Mufudzi wechiGerman? Zvimwe se canine bodyguard!
Akashinga uye ane simba imbwa yeGerman Mufudzi Muzana ramakore rechi19, mukuru weGerman Kaputeni Max von Stephanitz akatsvaka kugadzira imbwa inofudza yeGerman seisina mumwe. Kubudikidza nekuchengetera kuyambuka, yazvino Mufudzi wechiGerman Imbwa akabuda.
Yakapfupikiswa kuGSD, aya canines akakurumidza kuratidza kugona kwakawanda kupfuura kufudza. Mumwe akatomboita mukurumbira wemubhaisikopo anonzi Rin Tin Tin.
Nhasi, ivo anowanzo shandiswa mumabasa emapurisa, bhomba uye kuona zvinodhaka, uye kuchengetedzwa kwega. Anotyisa akavimbika uye anotyisa ane chivimbo , haudi kuenda kudivi rakaipa rembwa iyi!
Musanganiswa weAustralia wechiGerman Mufudzi unogona kusazivikanwa neAmerican Kennel Club (AKC) sevabereki vayo. Zvakadaro, iyo American Canine Mbeu dzakauchikwa Club (ACHC) uye Imbwa Registry yeAmerica, Inc. (DRA) inoita.
Zvinotomboita kufungidzira kutaridzika kwembwa dhizaini, uye izvi hazvigone kuve zvechokwadi kune yeGerman Mufudzi weAustralia Mufudzi musanganiswa!
Vazhinji vakadaro yakanyatsoenzana, miviri yemitambo. Kutsvedza kwavo kumashure uye makumbo marefu vanovapa iyo ambling gait yeGSD neAussie's peppy nhanho.
Set kumusoro kumusoro kwavo kwakanyatsoenzana-musoro vari nzeve nhatu nemazano akakomberedzwa . Iyo inogona kuramba ichikwira chero kupi kubva pakamira uye yambiro kune floppy uye yakapetwa.
Yavo maziso emarumondi vane chirevo icho chinotarisa uye chakangwara. Ruvara rwemaziso runosiyana kubva imbwa kuenda kune imbwa. Kazhinji kazhinji, tinovaona vaine shava, bhuruu, kana hazel maziso .
Yako pooch inogona kunyange kugara nhaka heterochromia kubva kudivi ravo reAussie, mamiriro anovapa maviri mavara eziso akasiyana!
Muzzles anogona kunge ari epakati kana akareba anotetepa zvishoma uye aine tambo yakakomberedzwa.
Mufudzi wako weAustralia Mufudzi wechiGerman Mufudzi anogona kuve nemuswe unoputika, wakapetwa unogona kuva wakareba kana mupfupi, zvichienderana nekuti ndevapi vana vavanotora mushure.
Kana zvasvika kune yavo fur, ivo kazhinji vane yakananga kune wavy mbiri jasi iri pfupi- kusvika pakati-kureba .
Ivo vanotamba rakasimba vara, nepo vamwe vaine musanganiswa we dema, tani, tsvuku, kirimu, goridhe, chena, bhuruu merle, kana mutsvuku merle .
Dzimwe dzinogona kunge dzakatetepa kana dziine matinji esirivhi grey kana brindle, ane mavara kana mavara.
Yakakura sei iyo yeGerman Mufudzi weAustralia Mufudzi musanganiswa anowana?
Vakakura zvizere Aussie Vafudzi veGerman kazhinji vane hurefu hwe 19 kusvika 26 inches kureba (48 kusvika 66 cm) uye kuyera 45 kusvika ku80 mapaundi (Makumi maviri kusvika makumi matatu makirogiramu), uko vanhurume vanowanzove vanorema kupfuura vakadzi.
Izvi zviri kufungidzira kuti mwana wako ane akajairika-saizi yeAustralia Mufudzi mubereki.
Kana pooch yako ichibva kuToyi kana Miniature Mufudzi weAustralia , dzinogona kuve diki zvakanyanya.
Kunyangwe kana wako wechiGerman Mufudzi weAustralia Mufudzi musanganiswa ari mudiki pane avhareji, isu hatikurudzire rudzi urwu kune vanogara mumafurati .
Simba ravo rakaganhurirwa zvakanyanya kune chero chinhu kunze kweimba yakakura ine yadhi hombe. Mapurazi nemapurazi zvaizoitawo imba yakanaka yeiri rakasanganiswa rudzi.
Chinhu chinotonhorera nezve maGerman Australian Mufudzi anosanganiswa ndezvekuti ivo vakaenzana zvikamu zvine rudo uye vakasvinura. Neichi chakayambuka, iwe unowana iyo imbwa yekuchengetedza ine hushamwari uye shamwari yemhuri , ose akakungurutswa kuita kamwe chete.
Nekuti iyi pooch yakasarudzika uye inongwarira vashoma, inovaita ivo yakavimbika wachi . Ivo havasi makuru ekuhukura, asi tarisira kumwe kuhukura kana vanhu vasina kujaira vari padyo.
Vamwe veAustralia vafudzi veGerman vane hunhu hwakasimba hwekuchengetedza, uye hauzomboziva kana mwana wako ari mumwe wavo kusvikira wapedza nguva yakati pamwe chete.
Zvingave zvakanaka kana iwe ukasamirira kusvikira iwe waona yako fido mavara echokwadi kuti utange kudzidzisa nekuwadzana navo.
Kujekesa kune vanhu vakasiyana uye mamiriro ezvinhu kwakakosha kune iyi yakasanganiswa. Tanga maitiro aya vachiri vadiki, kutanga kwemavhiki maviri ne2 , uye chengetedzai zvakanaka.
ChiGerman Aussie Vafudzi vari akangwara zvine mutsindo , asi zvakare vane yakazvimirira streak izvo zvinonyanya kugarwa nhaka kubva kumubereki wavo weAustralia Mufudzi.
Kuti urambe uchibatikana, sanganisira rumbidzo yakawanda uye zvinonaka zvinonaka . Uye usamanikidze pooch yako kusangana nevasingazive kana vasina kugadzikana!
Iwe unogona kutofunga kudzidzisa tomu shamwari yako yakasanganiswa, kunyanya kana akajoinha paki yako sevechiri kuyaruka kana munhu mukuru.
Izvi zvingaite kunge zvine hukasha, asi matomu inogona kuve chishandiso chakanakisa chekuchengetedza imbwa yako nevamwe vanhu vakachengeteka. Chero bedzi iyo tomu isiri kushandiswa sechirango, imbwa yako inozojaira iyo pasina nguva!
Kana ichi chakayambuka chiri kutanga kurira kunge chinotyisa, ramba uchifunga kuti ivo zvizere vakazvipira kumhuri dzavo, uye vanofarira kutamba !
Tora miniti kuti utarise iyi vhidhiyo yeAustralia Mufudzi wechiGerman Mufudzi musanganiswa mbwanana dzichitamba nevavanorara navo uye matoyi.
Vana vako vanonakidzwa neiyo yakasanganiswa, zvakare. Vese vafudzi veGerman uye veAustralia vafudzi vari inozivikanwa nekutsungirira kwavo uye hushamwari kune vana .
Funga nezvevazukuru vavo vanoyambuka se canine nanny yemhando.
Zvakadaro, iwe unoda kutarisa nguva yekutamba nevana vadiki. Iyo Aussie yeGerman Mufudzi yekufudza hunhu hunogona kukanda mukati panguva isiri iyo nguva.
Isu hatidi kukuudza iwe kuti mudiki sei mwana wako mudiki anoda kukosheswa ne70-pondo mammoth.
Iwe unofanirwa zvakare kungwarira kana uine zvimwe zvipfuyo mumba - kunyanya zvipfuyo zvinoita kunge chikafu.
Pane mukana wakanaka wekuti wako wekuAustralia wechiGerman Mufudzi angave ari ega-imbwa mhando ye canine . Uye ne yakakwira yakakwira mhuka yekutyaira , isu hatigone kuvimbisa kuti ivo vanozove akanakisa buds nekati yemhuri, chero.
Nepo imbwa iyi isingakodzere mamiriro ese ehupenyu, pane zvakawanda zvekuyemura nezve rudzi urwu.
Kutendeseka, varidzi vane ruzivo ndiani anogona kushandisa chikamu chakanaka chezuva rega rega kubatana uye nekudzidzisa uyu mwana pasina mubvunzo achakohwa mibairo.
Vakanyatsodzidziswa veGerman Aussie musanganiswa vanokwanisa zvimwe zvinoshamisa zviito. Kubva pakutsvaga-uye-kununura kurapa, kusvika kune yakanaka ol fashoni, imbwa idzi hadzirege kumira kufadza.
Iwe unofanirwa kufunga nezvekupa kunzwisiswa kwepfungwa kumba nekupa yako yeGerman Aussie Mufudzi musanganiswa Puzzles , matoyi anoshanda , pamwe nekudzvanya nekuteerera kudzidziswa.
Imbwa yega yega inoda kumwe kubatsirwa kana zvasvika pakuchengeta kwese nekuchengetedza. Uye ngative vakatendeseka, kurera vacheche vedu vacheche kunotifadza, zvakare.
Chimwe chezvinhu zvekutanga zvaunofanira kufunga nezvako kana uchisimudza yako Aussie ChiGerman Mufudzi ndechekuti vane mwero kushivirira kupisa.
Vachafarira kutonhora kwemamiriro ekunze zvakanyanya nekuda kwejasi ravo, saka chenjera kana uine iri rakasanganiswa rudzi uye ugare kumwe kunogara kuchidziya.
Mufudzi weAustralia wechiGerman Mufudzi anodururwa here?
Kana iwe wakashandisa chero nguva yakati wandei kutenderedza yeAustralia Mufudzi kana GSD, iwe unoziva kuti unofamba uchienda nehafu yehuswa hwavo hwakanamatira pambatya dzako.
Vana vavo vanoyambuka vanoonekwa se moderder ine mwero ine avhareji yekushambidzira inoda .
Asi semamwe macainine akaputirwa kaviri, anodurura zvakanyanya panguva yavo yepamoyo yegore - yekudonha uye kudonha.
Iwe uchada kukwesha yako yeGerman Mufudzi Aussie musanganiswa kanenge vhiki rese kuti varambe vachikanya uye kubvisa bvudzi rakafa rakafuka muhomwe yavo.
Tinokurudzira kushandisa slicker bhurasho uye a rake uku uchifamba munzira imwechete sekukura kwebvudzi.
Mabhati anofanirwa kupihwa chete pazvinenge zvakakodzera achishandisa nyoro imbwa shambuu paunenge uchigeza chipfuwo chako kuti usagumbure ganda rake kana kuomesa huta hwayo.
Kana iwe uchinzwa senge iwe waisakwanisa kubata kudonhedza futi uye iwe uchida kubvisa rako rese canine bvudzi, tora rakasiyana rudzi panzvimbo. Kuveura ndebvu HAZVIMBONI imbwa dzine jasi mbiri.
Heino vhidhiyo inotsanangura kuti nei usingafanire kuveura yako yeAustralia Mufudzi wechiGerman Mufudzi musanganiswa, kana chero mbiri yakaputirwa imbwa:
Chimwe chikamu chakakosha chekutsvaira kwemwana wako kutarisa nzeve dzavo mazuva ese . Nzeve dzakatwasuka dzinogona kukurumidza kuunganidza ivhu uye guruva.
Usati wachenesa, ona kana paine kutsvuka kana hwema, zvinova zviratidzo zvehutachiona. Kuchenesa kunogona kuitwa kamwe chete pasvondo nemucheka wakanyorova kana an nzeve kupukuta .
Usakanganwa iyo nzara dzinocheka , chero. Haisi chete mataipi anopinza anotora kunakidzwa kunze kwekutamba nembwa yako, asi nzara refu dzinogona kutsemuka nekutyoka.
Uyezve, ivo havana chokwadi. Mazhinji pups anogona kuita nepedicure kamwe chete pamwedzi kana zvakadaro , asi izvi zvinosiyana kubva imbwa imbwa.
Nezvehutsanana hwemuromo, geza mazino ako eAussie German Mufudzi musanganiswa kanokwana katatu pavhiki uchishandisa chikwesheso uye mushonga wemazino yakagadzirirwa imbwa.
Exercise: zvakadii chiitiko chinodiwa neGerman Aussie Mufudzi?
Kana iwe ukaona 'inofudza imbwa' uye ukangobvaruka ziya, ungangoda kuva nechigaro cheichi. Ronga pane maawa maviri azere ekurovedza muviri zuva nezuva yeiyi fireball ye canine.
Sezvineiwo, ino nguva inozopatsanurwa pakati pebasa rinotyisa uye kutamba, kudzidziswa, kana kufamba kwakajairika.
Kungofanana nevanhu, veAustralia veGerman vafudzi havadi kuita zvakafanana zvinhu kakawanda. Kuti uvachengete (uye iwe pachako) vafare, funga kunze kwechirevo bhokisi.
Kufamba kwakanaka, chokwadi, asi wakamboona here GSD Aussie mix dock dive? Zvakadiniko ne flyball? Iyi imwe pooch yekuchenjera, saka vanogona kudzidza kuita chero chinhu. Uye kwavari, kudzidza ihafu yekunakidzwa.
Kubatanidza kurovedza muviri pamwe nekuedza kwepfungwa inzira inonakidza yekupedza mwana wako. Zvinosimbisawo chisungo chenyu. Iko kukunda-kuhwina kune wese munhu!
Iwe unogona kudzidzisa furhu yako shamwari kubata inobhururuka discs neiyi Kong Frisbee , iyo inonyatsodiwa-inoshingaira fidos.
Kudya uye kudya kunovaka muviri: Ndeipi yakanakisa imbwa chikafu cheAustralia ChiGerman Mufudzi?
Sechirudzi chinoshanda, wako weGerman Australian Mufudzi anoda chikafu ine mapuroteni mazhinji kuchengetedza miviri yavo uye mhasuru zvine hutano.
Kune iro rakagutsikana Aussie ChiGerman Mufudzi mudumbu, tarisira 2.5 kusvika 4 makapu yeiyo yepamusoro mhando imbwa chikafu pazuva, iri anenge chiuru macalorie . Govanisa mari iyi muzvidimbu zviviri kuti usanyanye kudya zvakanyanya, kuzvimba uye chengeta shamwari yako yemumota ichawedzerwa.
Zvimwe pane metabolism yemhuka yako, tsvaga yakaoma kibble zvakakodzera huremu hwake, zera, uye hutano .
Unogona kutarisa kana ari kuwana mapaundi akawandisa nekuita yekubata-bvunzo, kwaunogona kunzwa mbabvu dzake. Kunyanya kufuta kunogona kuva chiratidzo chezvirwere zvakadai se insulinoma uye hypothyroidism. Saka zvakanaka kungwarira.
Mufudzi weAustralia Mufudzi weGerman Mufudzi anosanganisa imbwa dzine hutano dzinogona kunakidzwa ne hupenyu hwemakore mapfumbamwe kusvika gumi nemashanu !
Asi senge chero imbwa, varidzi vachazoda kutarisa kune mamwe matambudziko ehutano. Maitiro asina kufanira ekuuchika mumakore ekutanga emubereki wavo anogona kupa njodzi huru yekugara nhaka.
Joint nyaya senge hudyu negokora dysplasia zvinogoneka mune ese maGerman vafudzi uye veAustralia vafudzi.
Mwana wako anogona zvakare kusangana mamiriro eziso , kusanganisira Collie Eye Anomaly (CEA), colobomas, Progressive Retinal Atrophy (PRA), uye cataract.
Zvimwe zvishoma zvehutano zvinotariswa hemophilia, degenerative myelopathy, pfari, kunetseka kwezvinodhaka senge MPR , EPI , uye gomarara.
Kufungisisa kana uchigona kuwana imwe yeiyi imbwa dzinoshamisa? Une mhanza! Mufudzi weGerman Mufudzi weAustralia Mufudzi anogona kudhura $ 300 kusvika $ 800 .
Iwe unogona kuwana imwe yemutengo wakaderera, asi tarisira kubhadhara kumwe kunhu munzvimbo ino.
Iwe zvakare unofanirwa kufunga nezve zvimwe zvinoshandiswa senge mari yegore negore yekurapa uye isiri yekurapa izvo zvinogona kuve nemari inokwana $ 985 kusvika $ 1,200.
Mufudzi weAustralia Mufudzi wechiGerman musanganiswa vafudzi
Kunhonga muberekesi kwakangokosha sekutora mbwanana yako.
Kana iwe usingaite yako yakakodzera kushingairira, iwe unoisa panjodzi yekubhadhara iri shoma-pane-stellar yekuita basa. Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuipa, unogona kuita kuti mwoyo wako ugadziriswe pamwana asina hutano.
Zvichipa mukana weGerman Aussie Mufudzi wemamiriro ekuzvarwa, zvakakosha kuti iwe tarisa marekodhi ekurapa evabereki uye tora vimbiso yehutano yemwana .
Ramba uchifunga kuti izvi zvinyorwa zvinofanirwa kusanganisira zvinopfuura kungoongorora vet. Iwe urikutsvaga humbowo hwekunyatso kuongorora majini. Tiza chero mubereki asingakwanise kupa mapepa aya.
Iwe zvakare uchada bvunza kuti marita anoshamwaridzana sei . Vavaki vakanaka kwazvo vane hanya zvakanyanya nezvembwanana dzavo sezvinoitwa nevatengi vavo.
Ivo vanofanirwa kuve vanoziva nezve iyi crossbreed hunhu uye kuda kwekutanga kudyidzana.
Uyezve, vafudzi vanofanirwa kuve nehukama hwakajeka nevana vavo. Kana imbwa dzakura kana imbwa panzvimbo inochengetera dzinoita senge dzakabatana kana dzinotya, uyu mureza wakakura mutsvuku.
Parizvino, zvinoita sekunge paine chero vafudzi kana makeni anopa iyi hybrid. Usanetseka, zvakadaro! Iwe unogona kukwanisa kuwana imwe yeaya madhira kuburikidza nekununura.
Mufudzi weAustralia Mufudzi wechiGerman Mufudzi anonunura
Pane akati wandei mabhenefiti ekutora wechiGerman Aussie Mufudzi. Kune kutanga, unogona kuchengetedza yakati wandei mari.
Iwe zvakare une sarudzo yekuunza kumba imbwa yakura uye kudzivirira izvo zvinoedza zvakanyanya zvehuputi (hello, poto kudzidziswa).
Zvichida chikamu chinonyanya kufadza chekununura imbwa kupa pooch inoda imba ine rudo, yakagadzikana. Ndiani asingade kuve gamba ravo canine pal?
Sezvo iwe uchitsvaga matumba emuno nemasangano makuru ekununura, ramba uchifunga kuti haugone kuwana wekuAustralia wechiGerman Mufudzi iyo iri 50/50 kupatsanurwa. Imwe kana maviri mamwe marudzi anogona kukandwa mumusanganiswa.
Kana iwe usina kukanganiswa nechinhu chekushamisika, tarisa aya masosi ekununura kuti uwane wako nekusingaperi pup:
Anofara Miswe Kununura (Maple Grove, MN)
Vese Mufudzi Kununura (Baltimore, MD)
Aussie uye Me Kununura Mhuka (Sarasota, FL)
Heartland ChiGerman Mufudzi Kununura (Gretna, NE)
Westside ChiGerman Mufudzi Kununura (Los Angeles, CA)
Kana iwe uchida kutarisa kune dzimwe imbwa dzekugadzira ine yeGerman Shepherd kana yeAustralia Mufudzi mubereki, saka aya marudzi akasanganiswa anogona kukufarira:
Mufudzi weAustralia Blue Heeler musanganiswa (AKA Texas Heeler)
YeAustralia Mufudzi Lab musanganiswa (AKA Aussiedor)
Mufudzi weAustralia Mufudzi Corgi (AKA Auggie)
Mombe dzeAustralia Imbwa yeGerman Mufudzi musanganiswa (AKA Mombe Mufudzi)
ChiGerman Mufudzi weAustralia Kelpie musanganiswa (AKA ChiGerman Mufudzi Kelpie)
ChiGerman Mufudzi Rottweiler musanganiswa (AKA Shottie)
Mufudzi weGerman weAustralia ndi inoshamisa canine . Kuvimbika kuchikanganiso, vanogona kuve ivo vakatarisisa uye akanakisa anomhanya.
Vanoita zvinoda muridzi anoshingaira, zvisinei. Vabereki vevapambi vevapfuuri kana avo vane marongero akarongedzwa vanofanirwa kufunga zvakadzama vasati vaunza imwe yeiyi imbwa kumba.
Funga kuti unokwanisa kubata rudzi runonakidza senge yeAustralia Mufudzi wechiGerman Mufudzi musanganiswa? Goverana pfungwa dzako mune zvakataurwa!
Chokwadi chaunoda kuziva nezve Feist imbwa
Iko Great Pyrenees Lab inosanganisa inodiwa bere-imbwa?
Caucasian Mountain Imbwa: Anonzwisisa, akavimbika muchengeti
IAZ yeMazita ePuppy (300+ Yakasarudzika, Akakurumbira & Akanaka Mazita eVadiki)
Mufudzi wechiGerman weGoridhe Retriever Sanganisa akakunakira iwe?
French Bulldog Mazita: 250+ Mafaro & Anoshamisa Mazita eFrenchies
Maitiro Ekudzidzisa A French Bulldog Mumavhiki masere (Nyore, Kurumidza, & Kunakidzwa)
200+ Akanakisa echiGerman Imbwa Mazita & Zvinorehwa
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Kuvasz Imbwa Inobereka
Teacup Chihuahua: Mbwanana, Hupenyu hwehupenyu, Mutengo, Mifananidzo & Vafudzi
Iyo Inoshanda Nesimba Imbwa Mhuri: Ziva Kuziva Chirungu Mufudzi
yakakura sei iyo chihuahua terrier musanganiswa inosvika
brindle boxer uye pitbull musanganiswa
poodle uye shih tzu musanganiswa
ndeupi musiyano pakati pegolden retriever uye labrador retriever
aussie uye border collie musanganiswa